Qufulka Iyo Handraabkuna Waa Wax Qabadkii Sanadkee Madaxwayne Ha Ilaabin..
Monday December 17, 2018 - 00:32:17 in XULASHADA by M Ayaanle
W/Q Maxamed Andar Hanaanka maamulida hagida iyo hogaaminta bulsho ayaa ah haybad udhalasho oo alle adoomihiisa qaarkod ugaar yeelay isla markaasna aan ahayn shay iska yeel yeel ah.
Hogaamiyaha wanaagsanina waxa uu kasoo dhex mudhaa bulshada dhexdeeda taas oo waa horeba lasii helo ifafaalaha hogaamineed ee qofkani, hoygiisa, asxaabtiisa iyo bulshada dhexdeedaba ku leeyahay, Hogaamiyahuna waxa uu noqda mid bulshada u jiheeha wado qaldan oon la mahadin ama waxa uu noqdaaa mid bulshada u horseeda horumar iyo wanaag.
Waxaynu mararka qaar bulshada dhexdeeda ku aragnaa shaqsi da ahaan yar misana maamulaya shaqsiyaad ka waawayn oo ka aqoon iyo waayo aragnimo fara badan, Hadaba Maxay Ku Dhacdaa? Waa su,aal kooban oo jawaab teeda aan u dhaafayo akhristyaashu inay caqligooda, garaadkooda iyo garashadooda ku miisaamaan.
hore aan ugu sii socda toobiyaha aan ku beegsanayo qoraalkaygan shaqsiyada hogaamineed ee madaxwayne biixi, waxyaabihii ka bariiqday, kuwii U hirgalay iyo barnaamijka laga diyaariyay mudadii sanadka ahayd ee uu talada dalka hayay iyo waliba hal waxqabad oo laga ilaaway barnamijka waxqabdka sanadka mudnaana in lagu daro waa qufulka iyo handaraabkee.
Aan ku horeeyo caqliyadaydana aan ku cabiro shaqsiyada hogamined ee madxwayne biixi hal iyo labana aan idin la wadaagee, madaxwayne muuse horta hogaamiye hore maso noqday? Hadiiii jawaabtu haa tahay Sidee Ayuu Usoo maamulay? Ogsoonaw sidan hore qoralkayga ugu soo xusay hogaamintu waa shay udhalsho ah oo alle adoomihiisa qaarkood ugarto, Waxaana marag iyo markhaati cad kuu noqonaya in hogamintu dhalanteed tahay somaliland lafteeda waxaa ku nool boqolaal madaxwayne biixi ka cilmi iyo aqoon badan, ka maal iyo hanti badan, ka hadal iyo aftahanimo badan. Kana khibrad iyo waayo aragnimo badan, hadana nasiib u yeeshay in madaxwayne muuse maamulo, Taa qadarka Alle Iyo Qoraal Eebe Udaa.
Aan udaadago waxqabado run ah oo madaxwaynuhu ku bariiqday inuu hirgaliyo mudadii sanadka ahayd una badnaa balan qaadyadiisii. Isku xidhka iyo isu soo dhawaynta bulshada kala duwan ee somaliland, ka gungaadhida saami qabysiga beelaha somaliland, bogsiin la,aanta xanaftii, xumaantii iyo magacbixintii xumayd ee ka dhalatay doorashadii, doorkii dhalinyarada, doorkii saxaafada, siyaasadii arimaha dibada ee dalka, guud ahaanba qodobadaasi waxay noqdeen kuwo ay ku fashilantay xukuumdu loona baahnaa inay wax ka qabto walina waa kuwa ay shacabku tabayaan.
Hoos aan ugu daadago barnamijka waxqabadka sanadkee, horta qofka ama shaqsigu Ma sida uu Isu yaqaanaa Mise waa sida ay bulshadu utaqaano? Waxaan uga socdaa taa, ma inay xukumadu qiimayso wax qabadkeedii sanadkaa mise waa inay bulshadu qiimayso wixii xukuumadu uqabatay mudadii sanadka ahayd? barnamijka waxqabadka sanadka intii wanaagsanayd oo dhan ayaa lagusoo koobay waliba yaa kuso koobay, madaxwaynaha iyo intii la shaqaynaysay, runtiina waxay ahayd in bulshadu qiimayso waxyaabihii uqabsoomay xukuumada mudadii sanadka ahayd ee may ahayn in xukuumada lafteedu is qiimayso oo ay wanaageeda soo horu mariso, gefefka iyo xumaanteedana qariso iyada oo warbaahinta adeegsanaysa lacagna ku bixinaysa sidii loo baahin lahaa barnaamijkan faafreeban.
Waxaanse kusoo gunaanadayaa oo qoraalkayga kusoo gaabinayaa qodob muhiim uh barnaamijka waxqabadka sanadka oo ahayd in xaga hore lagaga daro maadaama uu waxqabadkii xukuumada ee sanadkan ka mid ahaa waana qufulka iyo hanadaraabka, Sababtoo ah siduu madaxwaynuhu hore u sheegay intay khasnaduhu ufurnaan lahaayeen inay ka fiicantahay inuu handaraabo oo uu handaraabku ufiicanyahay misana maalmo ka dib uu quful nayn bi nayna oo sacada ku xidhay sidaana ay khasnadii quful iyo hanadaraab u saarmeen amaana yihiin hada, miyaanay wax qabad ahayn .... Dee Qufulka Iyo Handaraabkuba waa waxqabadkii sanadkee madaxwayne ha ilaawin.
QufulkaQufulka Iyo Handraabkuna Waa Wax Qabadkii Sanadkee Madaxwayne Ha Ilaabin..W/Q Maxamed Andar
Xukuumada Madaxwayne Biixi oo la Sheegey in ay Guclo Orod ugu Jirto sidii ay Xidhiidh ula samayn lahayd Xukuumada Madaxwayne Trump
Daawo Suldaan si adag uga Hadlay Dhulka uu Madaxwayne Biixi Ka Dhisayo Madaxtooyada Cusub isagoo Suldaanku sheegey in Xoog lagaga qaaday Maati iyo weerar usheegey inlagu qaadayo Madaxtooyada